Mofon’aina – TALATA 28 NOVAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 28 NOVAMBRA 2017
Fandresena, Fijaliana, Jesoa
21 Ary izany no nisamboran’ ny Jiosy ahy teo an-kianjan’ ny tempoly sy nitadiavany hahafaty ahy.22 Ary noho ny fitahian’ Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandraka andro-any aho ka manambara na amin’ ny kely na amin’ ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazain’ ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy,23 fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin’ ny maty ka hitory fahazavana amin’ ny olona Isiraely sy amin’ ny jentilisa.
ASAN’NY APOSTOLY 26 :21-23
MIJORO NY MPANARA-DIA NY TOMPO
1-Na dia enjehina aza (and 21)
Vanim-potoana mavaivay tamin’ny fanenjehana ny kristiana no indro i Paoly Apostoly mandahanteny eo anatrehan’i Agripa mpanjaka. Manakaiky azy tanteraka ny loza sy ny fahafatesana amin’izany, satria ny hafa aza natao haza lambo, mainka fa ny Apostoly Paoly izay efa eo anatrehan’ny fitsarana rahateo. Koa manambara ny fanenjehana sy ny fisamborana ary ny fihendrena hahafaty azy ity , saingy noho ny fitahian ‘ Andriamanitra no mbola mampijoro azy . Koa na inona na inona miseho eo amin’ny fiainantsika kristiana dia azo itokiana fa ny fitahian’ Andriamanitra no mampaharitra antsika.
2-Mba hanambara an’i Kristy (and 22-23)
Ny voalazan’ny lalàna sy ny Mpaminany no vontoatin’ny fanambarana , izay tsy iza fa i Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin’ny maty . I Paoly eto dia tsy sasatra manambara an’i Kristy. Tsy mandehandeha ho azy ny fiainantsika. Tsy misy hoe: vintana sy anjara ny antony ahavelomantsika fa ho mpitory sy ho mpanambara an’i Kristy amin’ny androntsika rehetra , na ho lava na ho fohy izany . Tsy maintsy miainga amin’ny Tenin’ Andriamanitra voasoratra ao amin’ny Soratra masina hatrany anefa izany , mba ho marina ny fanambarana ataontsika .
Efa nanomboka ny « iraka » ve ianao? Raha « tsia » , inona no antony ? Raha « eny » , inona no mety hampijanona anao ?
Mofon'aina - ALAROBIA 29…